Afrika: Lalao Olaimpika 2012 Londres – Ho Avy Izahay! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2012 13:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, Ελληνικά, বাংলা, عربي, srpski, русский, Magyar, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Tamin'ny faha-17 andro sisa tsy hahatongavan'ny lalao Olaimpika 2012 ka hiaina indray ny fientanentanana eo amin'ny lafiny fanatanjahatena ampiantranoan'ny Londres ity – Fanindroany no nandraisany izany teo amin'ny tantara maoderin'izy ireo. Misy fiomanana betsaka ho an'ny Afrika, ary ho an'ny firenena sasany kosa, io lalao io no fara-tampon'ny taona niomanana sy fanavaozana indray ny fifaninana.
Nanome fijery ara-tantara amin'ny fandrosoan'ny firenena Afrikana handroso hatramin'ny nisian'ny solontena voalohany tamin'ny taona 1908 i Afritorial:
Efa mpikambana nandritra ny fotoana ela tao amin'ny fianakaviam-be Olaimpika ny firenena Afrikana tamin'ny fandraisana anjara ny Olaimpiady maoderina hatramin'ny 1908, rehefa i Afrika atsimo irery no firenena atsimon'i Sahara nandray anjara tany Londres.
Ejypta no firenena mpandray anjara faharoa tamin'ny taona 1928 tao Amsterddam. Niova ny tahan'ny fandraisana anjara ny taona 1960 tamin'ny firohotan'ny firenena afrikana nahazo fahaleovantena avy tamin'ireo mpanjanaka; nandray talohan'io daty io ny firenena Afrikana,fa amin'ny ankapobeny, amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny ekipan'ny mpanjanaka azy ireo.Ny firenena Afrikanina ankehitriny no mpandray anjara nahomby teo amin'ny sehatry ny olaimpika iraisam-pirenena.
Etiopia, Afrika atsimo, Kenya Nigeria ary Ghana no mety hahazo vintana amin'ny medaily betsaka amin'ity lalao 2012 ity. Mampiaiky volana tokoa ny atletan'izy ireo, lalina ny fandaharan'izy ireo amin'ny olaimpika ary mampanjaka ny fanatanjahantena amin'ny hazakazaka lavitr'ezaka sy antonony izy ireo raha toa ka tsy nandefa afa-tsy atleta 2 any Londres kosa ny firenena Togo noho izy ireo tsy afaka mandefa mihoatra, na dia tafakatra aza izy.
Kenyana any amin'ny Olaimpika. loharanon-tsary: sportskenya.blogspot.com
Mampatsiahy antsika ny fifandrafiana taloha toy ny nisy teo amin'ny Etiopiana sy ny Kenyana nandritra ny atletisma sy ny hazakazaka lavitr'ezaka ny “ECAD Forums”:
Hipetraka ho mpifaninana Afrikana mihaza medaily matanjaka indrindra hamafisana lehibe indrindra hiandrandràna ny medaly afrikanina amin'ny lalao olaimpika i Kenya sy Etiopia.
Raha toa tsy nahavita nandahatra ny lehilahy sy vehivavin'i Afrika Atsinanana eny amin'ny lampihazo i Afrika atsimo, diso fanantenana izy ireo raha nihevitra ny hahavita tsara kokoa tany Beijing efa-taona lasa izay raha medaily iray fotsiny no azo tamin'ny nandefasana atleta 253.
Nigeria no firenena hafa tsy maintsy mino ny fomba tokana hahazoana medaily volafotsy iray sy halimo telo rehefa niverina avy tany amin'ny lalao 2008 ary tsy maintsy hisy zavatra tsy ampoizina avy amin'ireo afrikana tsy fantatra izay tsy nisy nanara-maso loatra.
Nisy ny sasany tamin'ireo afrikana nandeha lavitra hanandrana sy hiaro ny toerana amin'ny 27 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra ahitana ny ekipa Afrika Atsimo lehilahy sy vehivavy eo amin'ny taranja “hockey” ary ny basikety ao amin-dry zareo Angoley manana herintsaina tsy azo folahina.
Voamarika ny fanavahana noho ny firazanana, na satria vehivavy na noho ny fivavahana arahana ataon'ny firenena mpandray anjara sasantsasany toy ny firenena arabon'i Arabia Saodita izay sambany nanome alalana ny vehivavy handray anjara amin'ny lalao:
Pierre de Coubertin, mpamorona ny lalao olaimpikan'ny vanim-potoana maoderina, nanoratra izany teny efa nihoatra ny 90 taona izany. Saingy vao tamin'ny faran'ny herinandro vao nanapa-kevitra hamela ny vehivavy handray anjara amin'ny lalao olaimpika i Arabia Saodita.(Aza manantena ny hijery ireo atleta amin'ny fitafy filomano na mitafy “manara-batana”, na izany aza). Katàra, nesorina tsy hifaninana handray ny lalaon'ny 2020, nanambara indray hisoratra hifaninana ho amin'ny lalao olaimpika 2024. Na izany aza, 2012 no taona voalohany nandefasany ekipa olaimpika hahitana vehivavy.
BA Haller nandrohy mankany amin'ny lahatsoratra momba ilay nesorina rantsambatana roa sambany sady handray anjara amin'ny lalao paralaimpika sy ny lalao olaimpika mihitsy. Vinanio anie fa Afrikana izy:
Oscar Pistorius no voasokajy ho mpihazakazaka tapa-drantsambatana roa amin'ny lalao olaimpika rehefa notsongain'i Afrika atsimo amin'ny 400m any Londres amin'ity taona 2012 ity. Tafakatra ao anatin'ny ekipan'ny hazakazaka 400 matatra in'efatra mifampitohy ihany koa ity mpilalao vao 25 taona ity. “Anio no andro nahafinaritra indrindra teo amin'ny fiainako”,hoy i Pistorious, izay ao anatin'ny fifaninanana ihany koa amin'ny lalao paralaimpika. “Voninahitra lehibe izany, ary tena faly aho fa nandritra ny taona nilofosana mafy, natambatra ny fitozoana sy ny fihafiana”.
Farany, ankafizo kely ny Tantaran'ny olaimpika Kenyana mandritra ny olaimpika amin'ny SportsKenya.